Mooshinka Trump:- Goormay Ubillaabaneysaa Dacwadda Sanetku? | Gaaroodi News
January 18, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa markale laga gudbiyay mooshin – haddaba maxaa la filayaa?
Wuxuu Trump noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ee laba goor wajaha mooshin xil ka qaadis ah, in kastoo dhowr maalmood ay uga harsan tahay shaqada xafiiska.
Mooshinka wuxuu micnihiisu yahay in Aqalka Hoose ee Congrees-ka uu gudbiyo kiis ku saabsan in xafiiska uu si khaldan u maamulay Trump.
Dimuquraadiyiinta oo maamulaya Aqalka waxay Trump ku eedeeyeen in uu kiciyay rabshado ka dib hadallo been abuur ah oo uu jeediyay oo ku saabsanaa doorashada, iyo in uu sabab u ahaa dadkii weeraray Aqalka Congress-ka ee Capitol Hill, 6-dii bishan January.
Qaar ka mid ah xildhibaannada xisbiga Jamhuuriyada ayaa taageeray mooshinkii laga gudbiyay Trump, Arbacadii.
Maxaa la filayaa in ay dhacaan?
Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, hadda waxaa dacwaddiisa loo gudbin doonaa Aqalka Sare ee Sanetka.
Haddii seddax-meelood laba-meel oo ka mid ah Aqalka ay taageeraan mooshinka, taas wuxuu micneheedu noqonayaa in Trump lagu helay dembiga, xafiiskana laga saarayo ka hor 21-ka bishan January.
Donald Trump ayaa xafiiska baneyn doono Arbacada soo socota ee Isbuucan, waxaana xilkaas loo dhaarin doonaa Joe Biden oo Dimuquraadi ah.
Haddaba, goormay dacwadda billaabaneysaa?
Taas weli ma cadda lamana oga.
Tallaabada xigta ee la sugayo waa in gudoomiyaha Aqalka Wakiillada, Nancy Pelosi, ay qoraalka mooshinka u gudbiso Aqalka Sare.
Kullanka xiga ee Aqalka uu yeellan doono waxaa la filayaa in uu noqdo Talaadada beri ah.
Balse waa maalin ka hor xilliga uu Trump baneynayo xafiiska Aqalka Cad ee Madaxweynaha Mareykanka.
Dacwad ma lagu oogi karaa ka dib marka uu xafiiska banneeyo?
Horey uma aysan dhicin, mana ahan wax la tijaabiyay, sidoo kale dastuurka Mareykanka ma qeexayo.
Mooshin socday xilligii madaxweyne Richard Nixon, ayaa la hakiyay ka dib markii uu xilka wareejiyay, sannadkii 1974-tii.
Haddaba, Donald Trump wuxuu kiiskiisa la aadi doonaa Maxkamadda Sare, wuxuuna ku andacooonayaa in dacwadda isaga ka dhanka ah ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn.
Saraakiil aan xilal sare haynin ayaa horey dacwad loogu oogay ka dib markii ay shaqada ka degeen.
Hoggaamiyaha hadda ee Aqalka Sare, oo Jamhuuri ah, iyo midka bedelaya, oo Dimuquraadi ah, waxay labadaba isu diyaariyeen dacwad maxkamadeed.
Aqalka Sare ma ku cadeyn karaa Trump in uu dembi galay?
Dimuquraadiyiinta waxay haystaan kala bar kuraasta 100 ka ah ee Sanetka, haddaba waxay u baahan yihiin 17 cod oo dhanka Jamhuuriga ah oo ka soo hor jeesta madaxweynaha xisbigooda ka tirsan.
Taas waxay noqoneysaa arrin aad ugu adag xisbi la ogaa in Trump uu si daacad ah u taageerayay muddadii uu xilka hayay.
Balse 10 ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ayaa taageeray mooshinka, sidoo kale dhowr sanetar ayaa muujiyay in ay gacan ka geysan karaan arrintaas.
Xitaa, Mitch McConnell, oo Aqalka Sare ku hoggaaminaya Jamhuuriga, wuxuu sheegay in uusan weli go’aansanin dhanka uu u codeyn doono.
Trump, markale ma u tartami karaa xilka madaxweynaha, haddii hadda dembiga lagu helo?
Haddii Aqalka Sanetka uu ku helo dembiga, Xildhi baannada labada Aqal waxaa suuragal ah in ay qabtaan codeyn ku saabsan in Donald Trump laga hor istaago in uu markale u tartamo xilka madaxweynaha Mareykanka – Wuxuu horey u muujiyay in 2024 uu u tartami doono xilkaas.
Tani waxay noqon kartaa saameynta ugu weyn ee Trump ka soo gaarta mooshinka hadda socda.
Haddii lagu cadeeyo in uu awoodda xafiiska si xun u isticmaalay, Aqalka Sanetka wuxuu u baahan doonaa aqlabiyad kooban oo Trump ka hor istaagta in uu xilka madaxweynaha mar kale qabto ama u tartamaba.
Sidoo kale waxay ka xannibi karaan “inuu wax shaqo ah u qabto dowladda, ha ahaato mid mushaari ah ama mid kaleba”.
Marka, 50 sanetar iyo codka madaxweyne ku xigeenka, Kamala Harris, ayaa ku filnaan doono in Trump laga hor istaago in uu qabto xafiis dambe oo siyaasadeed.
Waxaa suuragal ah in taas ay faa’iido u tahay in Jamhuuriyiinta rajada ka qabo in xilka madaxweynaha ay u tartamaan mustaqbalka iyo kuwa doonaya in Trump laga saaro xisbiga.
Waxyaabaha Trump uu weyn karo waxaa ka mid ah arrimaha dheeraadka ah ee loo sameeyay madaxweyneyaashii isaga ka horreeyay, sida uu qabo Xeerka Madaxweyne ee 1958-dii. Waxaa ka mid ah, lacagta howlgabka, ceymiska caafimaadka, iyo sugidda amnigiisa inta noloshiisa ka dhiman taas oo ah lacag ay bixinayaan dadka canshuurta bixiya.
Sikastaba, Mr Trump waxay u badan tahay in faa’idooyiinkiisa uu sii wadan doono, xitaa haddii dembiga lagu helo.
Dacwaddan dib ma loo dhigi karaa muddo isbuucyo ah?
Xubin sare oo ka tirsan Dimuquraadiga, wuxuu soo jeediyay in Aqalka Wakiillada ay suuragal tahay in warqadda mooshinka aysan u diri doonin Sanetka, illaa ay ka dhammaaneyso 100 ka maalmood ee ugu horeysa ee xilka Biden.
Taas waxay Mr Biden u fududeyneysaa in uu Sanetka soo jiito si ay u ansixiyaan Wasiiradiisa iyo bilowga shuruucda cusub ee uu kaga hortagayo xanuunka coronavirus.
Balse, Pelosi waxay muujisay in ay jeclaan lahayd in dhageysiga kiiska la dedejiyo.
Sidoo kale, Joe Biden wuxuu sheegay in uu soo dhoweynayo in Sanetka uu isu qeybiyo shaqooyiinka kala ah mooshinka Trump ka dhanka ah iyo ansixinta golihiisa wasiirada